Kusolwa umbango wezikhundla kubulawa ibamba likaThishanhloko | Eyethu News
Kusolwa umbango wezikhundla kubulawa ibamba likaThishanhloko
“Umsindo waqala ngesikhathi ebekwa njengeSekela likaThishanhloko ngonyaka owedlule.”
KUSOLWA umbango wezikhundla ngokubulawa kwebamba likaThishanhloko esikoleni samabanga aphakeme iLaduma High School KwaMpumuza.
UNks Mchunu udutshulwe wabulawa ngesikhathi efundisa abafundi bakamatikuletsheni namhlanje (ngoMgqibelo) kusona lesi sikole.
Ngokuthola kwaleliphephandaba ngomthombo walo ongaphakathi kulesi sikole kuthiwa kunombango wezikhundla obuvele ukhona kulesi sikole nokwenza basole ukuthi uyimbangela yokubulawa kukaNks Mchunu.
“UNks Mchunu ubeqokwe njengeSekela lakaThishanhloko ngonyaka odlule kodwa kwathi makwenzeka loko kwasuka umsindo uThishanhloko wavele wasula wathi angeke akwazi ukusebenzisana noNks Mchunu. Ngemuva kokuba uThishanhloko esulile uNks Mchunu ube esethatha izintambo njengebamba likaThishanhloko. Nakuba kusethusile loku okwenzekile kodwa besikulindele ngoba besekukukhulu ukungezwani khona ngaphakathi esikoleni,” kusho wona.
Uqhube wathi uNks Mchunu ubesehlale kulesikole iminyaka engama-25 njenge HOD kodwa engakaze aqokelwe esobuthishanhloko okaye isekela nokuthe uma eseqokwa njengesekela Thishanhloko kwasuka omkhulu umsindo.
“Kusho ukuthi basazophela abantu kubangwa izikhundla ngoba kusho ukuthi baningi abasifunayo lesikhundla sikaMchunu. Indlela labantu abenze ngayo bayakhombisa ukuthi bebezokwenza umsebenzi abawukhokhelwe baqede bahambe, kanti nesenzo sabo sokuthi bangazifihli sikhomba ukuthi akubona abala abasabi lutho,” kuphetha yena.
UNks Mchunu ubesanezinyanga ezintathu kuphela ebamba isikhundla sebamba likaThishanhloko.
Akaphumule onqobe I-Berg River Marathon U/23